Lataliyaha Amniga Qaranka dalka oo Dowladda Kenya ka diiday qorshe ay dagsatay oo sharci la’aan ah | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Lataliyaha Amniga Qaranka dalka oo Dowladda Kenya ka diiday qorshe ay dagsatay...
Lataliyaha Amniga Qaranka dalka oo Dowladda Kenya ka diiday qorshe ay dagsatay oo sharci la’aan ah
Lataliyaha amniga Qaranka Dowladda Federalka Soomaaliya Mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa si kulul uga falcelisay dhawaq dhowaan kasoo yeeray taliyaha ciidamadda Kenya, Robert Kariuki Kibochi, kaasoo ku saabsanaa joogitaanka askarta Kenya ee Soomaaliya kuwaa AMISOM katirsan.
Mudane Cabdisaciid ayaa u sheegay taliyaha ciidamada Kenya inuun ciidamada Kenya ay dalka ku joogi karaan kaliya rabitaanka dowladda Federalka waxaana uu u cadeeyay in xitaa Qaramada Midoobay aysan ku heyn Karin Soomaaliya hadii Dolwadda Federalka aysan raali ka aheyn.
Kibochi, oo u waramay warbaahinta KBC, ayaa shaaca ka dhigay in ciidamadda Kenya ay baaq kusii ahaan doonan Soomaaliya illaa laga adkaanayo maleyshiyadda Al-Shabaab ee gacansaarka la leh shabakadda argagixisada caalamiga Al-Qaacida.
Lataliyaha amniga Qaranka ayaa sheegeysa in wixii ka dambeeya sanadkan sii dhamaanaya ay soo gabagaboobi doonto in fasax la’aan ay Soomaaliya ku joogaan ciidamada dowladaha deriska ah ee ka tirsan howlgalka AMISOM, maadama ciidamada xoogga dalka oo kaliya ay la dagaalamaan Al shabaab islamarkaana ay guulo waaweyn gaareen.
“Fekerkiisa wuu ka hadli karaa. Laakiin mar walba waa in aan maanka ku haynaa in ciidamada AMISOM ay kaliya ku joogi karaan Soomaaliya rabitaanka dowladda federaalka. Go’aanka ayaga malahan,” ayuu yiri CabdiSaciid Muuse Cali, oo ah lataliyaha arrimaha amniga qaranka ee Dowladda Federalka Soomaaliya.
Wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray Mudane Cabdisaciid: “Golaha ammaanka Qaramada Midoobay cidda uu wax ka waydiinayo in ciidamadaas sii joogayaan iyo in kale waa dowladda Soomaaliya”.
Sida laga soo xigtey lataliyaha amniga Qaranka Cabdicasiid kadib dhamaadka sanadkan “waxaa adkaan doonta in ay Soomaaliya sii joogaan ciidamadda dowladaha deriska”.
Howlgalka AMISOM ayaa haatan wajahaya hubanti la’aan baahsan maadaama 14-sano oo dalka ay joogeen ku dhameysteen mushaar qaadasho iyo fadhiidnimo. Is-mari-waa ayaana ka taagan qaabka u sii shaqeyn karo iyaddoo ay jiraan.
Hadalka Lataliyaha Amniga Qarankan ayaa dhiirogelin u ah ciidamada xoogga dalka ee furintankula dagaalamaya Al shabaab kuwaa oo hadda guulo waaweyn ka gaaray howlgallada ka socda goballada Mudug, Shabeelada Dhexe iyo Shabeelaha Hoose.
Waxaa dhanka kale jirta qorshe dhaqaale hor leh loogu raadinayo xoogga dalka si ay niyadooda loo kaabo islamarkaana ay isku filnaasho dhanka saadka ah gaaraan waxaana mas’uuliyiinta ka shaqeyneysa kamid ah Lataliyaha Amniga Qaranka.
Previous articleChelsea Oo Joojisay Baacsigii Ay Ugu Jireen Jules Kounde, Sabab – Banaadirsom
Next articleFeysal Cali Waraabe oo war la yaab-leh kasoo saaray doorashada Soomaaliya